सावधान ! यस्तो अवस्थामा झुक्किएरपनि केरा नखानुहोस् : जीवनभरी पछुताउनु पर्छ – Khabaarpati
October 15, 2020 October 15, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सावधान ! यस्तो अवस्थामा झुक्किएरपनि केरा नखानुहोस् : जीवनभरी पछुताउनु पर्छ
काठमाडौं । केरा स्वास्थ्यको लागि धेरै लाभदायक मानिन्छ । केरामा धेरै पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन् जुन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । यसले शरीरको भोक मेटाउँछ र बोसो कम गर्न सहयोग गर्दछ । किनकि केराले स्वस्थ बोसो समावेश गर्दछ जुन हाम्रो शरीरमा स्थिर हुँदैन र तौल बढाउँदैन, तर मोटोपनबाट टाढा हटाउँछ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यसलाई खाने सही तरीका र समय थाहा हुनुपर्छ । अक्सर मानिसहरू बिहान अफिस जान हतारमा खाली पेटमा केरा खान्छन्, किनभने उनीहरू महसुस गर्छन् कि यो ऊर्जाले भरिपूर्ण फल हो र तिनीहरूले दिनभरि यसबाट काम गर्ने उर्जा पाउनेछन्, तर विज्ञहरू भन्छन् कि खाली पेटमा केरा खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुँदैन । खाली पेटमा केरा खाँदा स्वास्थ्यलाई ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
पटासियम, फाइबर र म्याग्नीशियम केरामा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । तर फल एकै समयमा अम्लीय हुन्छ, विज्ञहरू भन्छन् कि खाली पेटमा केरा खाँदा पाचनमा समस्या हुन्छ । त्यसकारण खाली पेटमा केरा सेवन नगर्नुहोस् ।
पोटासियम र म्याग्नीशियम पनि केरामा अत्यधिक पाइने भएकोले यदि खाली पेटमा केरा सेवन गरेमा यी दुवै पोषक तत्त्वहरू रगतमा बढी हुन्छन् जसले हृदयलाई हानी पुर्‍याउँछ । त्यसैले खाली पेटमा केरा खानु अघि, एकपटक ध्यानपूर्वक सोच्नुहोस् ।
यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि केरा खाँदा दिनभर उर्जा प्राप्त हुन्छ ? यदि हो भने तपाँई सही हुनुहुन्छ । तर खाली पेटमा खाएको केराले तपाँईलाई कुनै लाभ हुँदैन । किनभने खाली पेटमा केरा खाँदा तपाईं तत्काल (अस्थायी) ऊर्जा पाउनुहुन्छ ।
केरा खाएपछि तपाईं चाँडै थाकेको र सुस्त महसुस गर्न थाल्नुहुनेछ र फेरि भोकाउनुहुनेछ । यस पछाडि तपाईलाई धेरै खाने समस्या पनि हुन सक्छ । त्यसकारण केरालाई बिहानको खाजामा समावेश गर्नु राम्रो हुन्छ, तर खाली पेटमा नखानुहोस् ।
धेरै मानिसहरू राती सुत्नु अघि केरा खान्छन्, जबकि उनीहरूले त्यस्तो गर्नु हुँदैन । किनभने रातमा केरा खाँदा तपाई बिरामी पर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यसले तपाईलाई खोकी लगायतका स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ ।